Bonhams Hong Kong Rare Jewellery & Jadeite လေလံပွဲအောင်ပွဲတွင်အရောင်များ - HIGH JEWELLERY DREAM
နိုဝင်ဘာလ 3, 2017
အစိမ်းရောင်၊ မီးနီ၊ နက်ပြာရောင်၊ ပုလဲဖြူပျော့နှင့်ရောင်စုံစိန်တောက်ပသောရောင်ခြည်။ Bonhams ဟောင်ကောင်ရှားပါးရတနာနှင့် Jadeite တွင်ဂုဏ်အသရေရှိကျောက်မျက်အရောင်များ လလေံပှဲလာမည့်နိုဝင်ဘာလ 26 ရက်။
Bonhams ၏အာရှနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအားဆွဲဆောင်ရန်ကျောက်မျက်ရတနာ ၁၂၀ ရောင်းချခြင်း။
အရောင်းအဝယ်၏ခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကသတ်မှတ်ထားသည် Cindy Chao မှဖန်စီရောင်စုံစိန်နှင့်စိန်ဝတ်စုံလက်စွပ်တစ် ဦး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဘဲဥပုံ - ဖြတ် featuring ၄.၂၃ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောပန်းရောင် - ခရမ်းရောင်စိန်.
Cindy Chao မှဒီဇိုင်းဆန်းရောင်စုံစိန်နှင့်စိန်ဝတ်စုံလက်စွပ်
၄.၂၃ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောဘဲဥပုံဖြတ်တောက်ထားသည့်ပန်းရောင် - ခရမ်းရောင်စိန်၊ တောက်ပသောဖြတ်တောက်ထားသောစိန်များပါ ၀ င်သည့်pavé-set သည်ကူဆီအထိတိုးချဲ့ထားသည် မူလအိတ်နှင့်အတူ Chao, လက်စွပ်အရွယ်4.23½
GIA ၏အစီရင်ခံစာတွင်ပါ ၀ င်သောစိန်သည်သဘာဝပန်းရောင် - ခရမ်းရောင်နှင့် SI1 ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ သတင်းနံပါတ် 15308718,
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်စွဲပါ
ခန့်မှန်းချက် - ဒေါ်လာ ၁-၁.၃ သန်း
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စိန်ပေါင်းတစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော်ကိုတူးဖော်ရရှိသည်ရာ၏ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသာကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်ကြသည် ရတနာအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့။ ထိုအရာ၏ 0.001 ထက်လျော့နည်း% ဖြစ်အရောင်၏လုံလောက်သောရွှဲရရှိထားသူဖြစ်ပါသည် ခွဲခြား 'ဖန်စီသောစိန်' အဖြစ်.
ခရမ်းရောင်နှင့်သဘာဝအရောင်အသွေးစုံသည့်ပန်းရောင် - ခရမ်းရောင်ကဲ့သို့အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည် နှင့် Fancy Pinkish-Purple စိန်များသည်အလွန်ရှားပါးသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၂ နှစ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်လွှား၌လေလံတင်ရောင်းချသောလက်တဆုပ်စာမျှသာရှိသည်။ ခရမ်းရောင်စိန်များအတွက်အရောင်များ၏အကြောင်းရင်းသည်ကြည်လင်သောပုံပျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် ၄ ​​င်းတို့၏အရောင်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာ ၀ န်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
အထူးသဖြင့်ရှားပါး။ အလွန်အမင်းလိုချင်တပ်မက်သော၊ ခရမ်းရောင်စိန်များသည်မူပိုင်ခွင့်၊
ဒီခမ်းနားရတနာအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန် Graeme Thompson ကလက်ဝတ်ရတနာအကြီးအကဲ၊ Bonhams Asia, said:
“ ဒီခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့လက်စွပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လေလံတင်ရောင်းချရတာ ၀ မ်းသာပါတယ်။ Cindy Chao သည် ၂၁ ရာစု၏အာရှတွင်ရှာဖွေမှုအရှိဆုံးအာရှရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမမိသားစု၏ရှေးဟောင်းဗိသုကာအမွေအနှစ်များအားတမူထူးခြားသောရတနာများဖန်တီးရန်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ပြည့်ဝတဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့သူတို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ရတနာပစ္စည်းတိုင်းဟာလက်ရာမြောက်ပါတယ်။
မျက်စိ - ဖမ်းသည် ကက်ရှမီးယားနီလာ အဲဒီလေလံကိုလေလံတင်မှာပါ
“ အိန္ဒိယအနောက်မြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွင်မြင့်မားစွာတည်ရှိသောမိုင်းများသည် ၁၈၈၀ ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်အထိဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာရိက္ခာတွေကုန်သွားပြီးကက်ရ်ှမီးယားနီလာနီလာတွေကိုရှားပါးလာစေတယ်။
ထိပ်တန်းစာရေးတံနှစ်ချပ်ကိုပထမနေရာတွင်ရိုက်မည် ၁၇.၃၃ Bulgari မှတပ်ဆင်ထားသောကာရက်နီလာနှင့်စိန်လက်စွပ်နှင့်ဒုတိယတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း ၆.၉၆ ကက်ရှမီးယား Sapphire၊ ပတ္တမြားနှင့်စိန်လက်စွပ်.
Bulgari မှ ၁၇,၃၃ ကာရက်ရှိမြန်မာ့ Sapphire and Diamond လက်စွပ်
လခြမ်းပုံသဏ္diamondာန်စိန်ပခုံးများအနက် ၁၇.၃၃ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောဘဲဥပုံဖြတ်ထားသောနီလာ၊ စိန်စုစုပေါင်း ၁.၂၀ ကာရက်၊ 'Bulgari by mounting' ဖြင့်လက်မှတ်ထိုးထားပြီးနံပါတ်၊ လက်စွပ်အရွယ် ၆½၊ မူရင်း
SSEF အစီရင်ခံစာနှင့်အတူသဘာဝ Sapphire သည်အပူကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောလက္ခဏာများမရှိဘဲမြန်မာနိုင်ငံမှဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မေလ ၇ ရက်နေ့စွဲနံပါတ် ၈၈၈၄ ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
မတ်လ ၁ ရက်ရက်စွဲပါရက်စွဲနံပါတ် 15027002 ။
ခန့်မှန်း: $ 370-500,00
အလေးချိန် ၆.၉၆ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိကူဖီးပုံသဏ္ireာန်သည်တောက်ပပြီးစိုပြေသောစိန်များဖြင့်ထုထည်ထားသောcalibréဖြတ်ပတ္တမြားပတ်လည်တွင်ပတ္တမြားစုစုပေါင်း ၁.၀၀ ကာရက်၊ လက်စွပ် ၆ ခုရှိသည်။
SSEF အစီရင်ခံစာနှင့်အတူသဘာဝနီလာသည်အပူကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောလက္ခဏာများမရှိပါ၊ ကက်ရှမီးယားမှဆင်းသက်လာသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ 87436 စက်တင်ဘာ 1 ရက်စွဲပါအစီရင်ခံစာနံပါတ် 2016 ။
AGL (American Gemological Laboratories) ၏အစီရင်ခံစာတွင်သဘာဝနီလာသည်အပူကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောလက္ခဏာများမပါရှိခြင်းနှင့်ကက်ရှမီးယားမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ 1073729 ရက်စွဲပါနံပါတ် CS 2, အစီရင်ခံစာ
သြဂုတ်လ 2016 ။
Gubelin ၏အစီရင်ခံချက်အရသဘာဝနီလာသည်အပူကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောလက္ခဏာများမရှိပါ၊ ကက်ရှမီးယားမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
16080051 သြဂုတ်လ9ရက်စွဲပါနံပါတ် 2016 ။
ခန့်မှန်းချက် - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ - ၃၃၀,၀၀၀
နက်ပြာရောင်မှစိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောအထိရောင်းရန်မှာအစိမ်းရောင်ကျောက်မျက်ရတနာများကိုရောင်းချမည်ဖြစ်သည် 10.02 carat 'No Oil' ကိုလံဘီယာမြနှင့်စိန်လက်စွပ်။
၁၀.၀၂ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောကူရှင်ပုံသဏ္emerာန်မြ၊ ထရီလီယံဖြတ်တောက်ထားသောစိန်ပခုံးများ၊ စိန်ပေါင်း ၁.၃၂ ကာရက်၊ လက်စွပ်အရွယ် ၆
SSEF အစီရင်ခံစာနှင့်အတူသဘာ ၀ မြများကကြည်လင်ပြတ်သားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြသခြင်းမရှိကြောင်းကိုလံဘီယာမှအစပြုဖော်ပြထားသည်။ စက်တင်ဘာလ 95268 ရက်စွဲပါရက်စွဲပါနံပါတ် 20, ။
Gubelin အစီရင်ခံစာနှင့်အတူသဘာဝမြမြသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြသခြင်းမရှိကြောင်းကိုလံဘီယာမှအစပြုဖော်ပြထားသည်။ သြဂုတ်လ 17081177 ရက် 31 ရက်စွဲပါနံပါတ် 2017 ။
၀.၇၁ နှင့် ၀.၆၁ ကာရက်ရှိစိန်များသည် D အရောင်၊ VVS0.71 နှင့် VS0.61 ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသည်ဟု GIA သတင်းများကဖော်ပြခဲ့သည်။2ခုနှစ်မေလ2ရက်စွဲပါနံပါတ်များကို 3255653752 နှင့် 1255653843 အစီရင်ခံစာနံပါတ်များ။
Graeme Thompson ကဆက်ပြောသည်
ကိုလံဘီယာသည်အကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအရည်အသွေးမြင့်သတ္တုတွင်းဟောင်းများ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောခမ်းနားထည်ဝါသောရေမြောင်းမပါဘဲရှာဖွေခြင်း၊ ၁၀ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောကြောင့်ဤအံ့ဖွယ်နမူနာကိုလေလံတင်ရောင်းချခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာကြသည်။
Bonhams သည်ဤကဲ့သို့သောလှပသောမြများပါသည့်ရတနာများကိုလည်းကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် Harry Winston မှကိုလံဘီယာမြနှင့်စိန်လည်ဆွဲ,
Harry Winston မှကိုလံဘီယာမြနှင့်စိန်လည်ဆွဲ
အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမြနှင့်အတူရှေ့ပိုင်းကို marquise နှင့်တောက်ပသောဖြတ်တောက်ထားသောစိန်များဖြင့်ချိတ်ထားသောသစ်တော်သီးပုံသဏ္diamondာန်စိန်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုစီစီ၊ တောက်ပသောစိန်များ၊ စိန်ပေါင်း ၃၈.၂ ကာရက်၊ စိန်ပွင့် ၁၅.၆၅ ကာရက်၊ ထုတ်လုပ်သူအမှတ်အသားများ၊ လက်မှတ်မထိုး၊ အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြစ်လာရန်အရှည် ၃၈.၅ စင်တီမီတာ
AGL (American Gemological Laboratories) မှတင်ပြသောအစီရင်ခံစာများအရ ၄.၅၂ နှင့် ၃.၇၀ ကာရက်ရှိသဘာဝမြများကဖော်ပြသည်။
1081732 မတ်လ 1081733 ရက်စွဲပါအစီရင်ခံစာနံပါတ်များကို 22 နှင့် 2017 ။
AGL (American Gemological Laboratories) မှတင်ပြသောအစီရင်ခံစာတွင် ၆.၇၂ ကာရက်ရှိသဘာဝမြမြသည်ရိုးရှင်းသောရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသေးစားအရိပ်အမြွက်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလံဘီယာမှဖော်ပြသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဇွန် 6.72 ရက်စွဲပါရက်စွဲနံပါတ် 8086431, ။
A ၂၇.၀၃ ကာရက်ကိုလံဘီယာမြနှင့်စိန်လက်စွပ်,
၂၇.၀၃ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောသကြားဓာတ် cabochon မြ၊ ထရိတ်ဖြတ်စိန်ပခုံးများ၊ စိန်အားလုံးပေါင်း ၂.၂၀ ကာရက်၊ လက်စွပ်အရွယ် ၅ ring
သဘာဝမြမြသည်စိမ်းလန်းစိုပြေသောအရောင်ဖြစ်သည်ဟု GRS ၏အစီရင်ခံစာတွင်ပါ ၀ င်သည်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းလက္ခဏာများရှိပြီးကိုလံဘီယာမှဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်စွဲပါအစီရင်ခံစာနံပါတ် GRS2015-098386
ပြီးတော့တစ် ဦး ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ကိုလံဘီယာမြနှင့်စိန်ဆွဲပြားနားကပ်များ1920 ခန့်။
၂၀ ရာစုအစောပိုင်းမြနှင့်စိန်ဆွဲကြိုးနားကပ် ၁၉၂၀ ခန့်
တစ်ခုချင်းစီနှင့်ရိုးရိုးစိန်ပွင့်ဖြတ်စိန်များမှဆိုင်းငံ့ထားသောအဟောင်းနှင့်တောက်ပသောစိန်ဟောင်းများပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိစိန်တစ်ခုစီသည်စုစုပေါင်း ၂.၆၀ ကာရက်ရှိစိန်များ၊ စုစုပေါင်းစည် ၆.၀၀ ကာရက်၊ အရှည် ၆.၀ စင်တီမီတာ
အောက်တိုဘာလ 95943 ရက် 11 ရက်စွဲပါအစီရင်ခံစာနံပါတ် 2017 ။
လာမည့်နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ဟောင်ကောင်ရှိ Bonhams Rare Jewels နှင့် Jadeite လေလံပွဲများတွင်ရောင်းချမည့်နောက်ထပ်သိသာထင်ရှားသည့်အချက်မှာဤအချက်ဖြစ်သည် Tiffany & Co မှလက်မှတ်ထိုးထားသောသဘာဝပုလဲနှင့်စိန်လည်ဆွဲနှင့် 1910 ရက်စွဲပါ။
Tiffany & Co မှသဘာဝပုလဲနှင့်စိန်လည်ဆွဲ
ရှစ်ဆယ့်တစ်တန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလည်ဆွဲသည် ၁၀.၁ မှ ၁.၁.၁ မီလီမီတာရှိသောသဘာဝပုလဲများမှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ၂.၉၇ ကာရက်အလေးချိန်ရှိပြီး ၂.၉၇ ကာရက်ရှိအလေးချိန် ၆၂.၀ စင်တီမီတာရှိသည်။
သဘာဝပုလဲများသည်ဆားငန်သောမူလအစဖြစ်ကြောင်း SSEF အစီရင်ခံစာနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်စွဲပါနံပါတ် ၈၁၄၉၉ ။
GIA ၏အစီရင်ခံစာတွင်ပါ ၀ င်သောစိန်မှာ E အရောင်နှင့် SI1 ရှင်းလင်းမှုဖြစ်သည်။ 2277117387 အောက်တိုဘာလ9ရက်စွဲပါနံပါတ် 2017 ။
ရှားရှားပါးပါးကြောင့်စုဆောင်းသူတွေကသဘာဝပုလဲတွေကိုပိုပိုပြီးယူလာကြတယ်။ အမှန်တကယ်ကောင်းသောသဘာဝပုလဲများ - အရွယ်အစား၊ ယူနီဖောင်းပုံသဏ္,ာန်၊ တောက်ပမှုနှင့်အပြစ်ကင်းသော - အရေခွံပေါ်အခြေခံပြီး - စျေးကွက်၌မကြာခဏပေါ်လာလေ့မရှိသကဲ့သို့၎င်းကဲ့သို့သောအရည်အသွေးကောင်းနမူနာများကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ရေရှည်တွင်သူတို့သည်အလွန်ရှားပါးလာပြီး ပို၍ စျေးကြီးရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီပုလဲတွေဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့မုန့်ကိုယ်ထည်အရောင်နဲ့အာရှအလှူရှင်တွေကြားမှာအလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့ရနံ့သုတ်ဆေးတစ်မျိုးပါ။ သွန်မ်ဆင်မှတ်ချက်။
ပတ္တမြားကိုကမ္ဘာတဝှမ်းရှိရတနာစုဆောင်းသူများကအလွန်တန်ဖိုးထားကြပြီး Harry Winston ၏လက်ဝတ်ရတနာများသည်ကမ္ဘာချီကြည်ညိုလေးစားမှုရရှိခဲ့သည်။ လာမည့်လေလံတွင် Bonhams ကဒီကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ် Harry Winston မှမြန်မာပတ္တမြားနှင့်စိန်လည်ဆွဲ.
Harry Winston မှမြန်မာပတ္တမြားနှင့်စိန်လည်ဆွဲ
cabishon ပတ္တမြား ၃၂ ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလည်ဆွဲ၊ တောက်ပသော၊ သစ်တော်သီးနှင့် marquise ဖြတ်ထားသောစိန်များ၊ စုစုပေါင်းစိန်ပေါင်း ၆၀.၀၀ ကာရက်၊ ပတ္တမြားစုစုပေါင်း ၁၆၀.၀၀ ကာရက်၊ Harry Winston အတွက် Jacques Timey ထုတ်လုပ်သူအမှတ်အသား၊
SSEF အစီရင်ခံစာနှင့်အတူသဘာဝပတ္တမြား ၃၃ ခုသည်အပူကုသမှုလက္ခဏာများမရှိဘဲမြန်မာနိုင်ငံမှဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ 85463 Aprilပြီလ6ရက်စွဲပါအစီရင်ခံစာနံပါတ် 2016 ။
တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးဒီစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ် Stephen Webster မှ ၁၀.၀၃ ကာရက်ရှိ E Colour VS10.03 Clarity Diamond နှင့်ရောင်စုံစိန်လက်စွပ် - အဆုံးစွန်ကြေညာချက်လက်စွပ်။
စတီဖင်ဝက်စတာ၊ ၁၀.၀၃ ကာရက်ရှိစိန်နှင့်ရောင်စုံစိန်လက်စွပ်
၁၀.၀၃ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောတောက်ပသောစိန်တစ်လုံးသည်တောက်ပ။ အရင့်ရောင်သောစိန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပွင့်လင်းမြင်သာသော 'thunderbolt' ဘောင်အတွင်းတွင်ပန်းရောင်တင့်အချို့ရှိသည်။ ထပ်မံ၍ marquise-cut စိန်များကမီးမောင်းထိုးပြထားပြီးကျန်ရှိသည့်စိန်အားလုံးမှာ ၃.၉၉ ကာရက်ရှိစုစုပေါင်းစိန်များ၊ အမှတ်အသား, လန်ဒန်အမာခံများ, လက်စွပ်အရွယ်အစား 10.03
၁၀.၀၃ ကာရက်ရှိစိန်သည်အရောင် (E) နှင့် VS10.03 ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိကြောင်း GIA မှဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်စွဲပါနံပါတ် ၇၁၈၁၁၀၂၅၇ ။
၁၉၈၂ ခုနှစ်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးစတီဗင်ဝက်ဘ်သည်ခေတ်မှီဂန္ထဝင်ဖန်တီးမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီးထာဝရဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းသောလူရွှင်တော်ဖြစ်သည်။ တံဆိပ်ကိုဂီတ၊ ဖက်ရှင်၊ စာပေနှင့်အနုပညာတို့ဖြင့်လှုံ့ဆော်သည်။ ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း၊ အသေးစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလှပဆုံးပစ္စည်းများအားရဲရင့်စွာပေါင်းစပ်ထားသည့် inimitable style
အဆိုပါ carousel ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်အတူဆက်လက် Salavetti အားဖြင့်ဖန်စီအရောင်စိန်နှင့်စိန်လည်ဆွဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သည့်ရတနာရတနာအိမ်။
သစ်တော်သီးပုံသဏ္diamondာန်အားဖြင့် ၄.၁၇ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသည့်စိန်တစ်ပွင့်အားလည်ဆွဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး
အလားတူဖြတ်တောက်ထားသည့်စိန်အမျိုးမျိုးရှိသောအရောင်များနှင့်ကျန်ရှိသောစိန်များသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄၂.၇၀ ကာရက်ရှိ၊ Salavetti လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၄.၇၇ ကာရက်ရှိစိန်သည်သဘာဝကျသောအစိမ်းရောင်အဝါရောင်အရောင်နှင့် SI4.17 ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသည်ဟု GIA အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အစီရင်ခံစာ
သြဂုတ်လ 1172201202 ရက်စွဲပါနံပါတ်4။
ထို့အပြင်ရွေးချယ်ထားသည့် marquise ဖြတ်ထားသောစိန်များသည်သဘာဝအရောင်ဖြစ်သည်ဟု GIA အစီရင်ခံစာ ၁၀ ခုနှင့်လည်းပါ ၀ င်သည်။ 30 ရက်စွဲပါအစီရင်ခံစာများနှင့်
31 သြဂုတ်လ 2016 ။
Salavetti ၏တက်ကြွ။ ထူးခြားသည့်အီတလီလက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်းများကိုကမ္ဘာအနှံ့တွင်ရှာဖွေပြီးအရည်အသွေးနှင့်ထူးကဲမှုအတွက်ကျော်ကြားသည်။ ထူးကဲသောလက်မှုလက်ရာ၊ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်စိန်များဖြစ်သည်။ ဤသည် Salavetti ကိုနိုင်ငံတကာထိပ်တန်းကျောက်မျက်ရတနာများအကြားတည်ထောင်ရန်ကူညီသည်။ အမြဲတမ်းဖက်ရှင်ကျသောဖက်ရှင်တွင်သူတို့၏ဒီဇိုင်းများသည်အဆင့်မြင့်ပြီးဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
Graeme Thompson သည်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအဆုံးသတ်သည် -
“ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်အလွန်ရှားပါးသောလက်ဝတ်ရတနာများပါ ၀ င်ပြီးမည်သည့်စုဆောင်းမှုကိုမဆိုပေါင်းထည့်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအံ့သြဖွယ်ရောင်းအားတစ်ခုထွက်လာသည်။ ဒီရောင်းချမှုမှာကမ္ဘာကျော်အိမ်များနှင့်ဒီဇိုင်းနာများကအမြဲတမ်းလိုလိုလားလားရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသောဖောက်သည်များနှင့်လူကြိုက်များတဲ့လက်မှတ်ထိုးရတနာလက်ရာရတနာအချို့ကိုပြသထားတယ်။ ”
As Andrew Shirley, အဘယ်သူ compiles Knight Frank ဇိမ်ခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညွှန်းကိန်း, said:
“ Q2 2017 အညွှန်းကိန်းသည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း ၁၄၂ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သောရတနာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအဓိကထားသည်။ ရတနာများသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောစုဆောင်းသူများ၏စိတ်ကူးကိုမည်သို့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေကြောင်းပြသခဲ့သည် ပိုင်ရှင်များကိုအလွန်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်သော်လည်းအလွန်များပြားလှသောမိုဘိုင်းပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
Tags:လလေံပှဲ • ချစ်သူ • ဟောင်ကောင် • ကျောက်စိမ်း
မှတ်ချက်0ခုBonhams ဟောင်ကောင်ရှားပါးရတနာနှင့်ကျောက်စိမ်းလေလံ - အောင်ပွဲခံအရောင်များ"